Singayinqoba i-Afcon - Khuzwayo | News24
Singayinqoba i-Afcon - Khuzwayo
Johannesburg - Unozinti weBafana Bafana, uBrilliant Khuzwayo, unethemba lokuthi bazophumelela e-Equatorial Guinea njengoba leli qembu liyodlala emqhudelwaneni we-African Cup of Nations.
UKhuzwayo ubonakale okwesibili edlalela iBafana ngesikhathi engena leli qembu lidla iZambia ngo-1-0 ngempelasonto, kanti uzobe enesifiso sokuthi uzophinde alithole ithuba kweminye imidlalo kulo mqhudelwano, kubika iSoccerLaduma.
Lo mdlali oneminyaka engu-24 ubudala weKaizer Chiefs uthi iBafana ingakwazi ukunqoba lo mqhudelwano ozobanjelwa e-Equatorial Guinea kulo nyaka.
Funda nalolu daba: Sayinqoba kunjena iligi nangokudlule - OweDowns.
Ekhuluma nabezindaba, uKhuzwayo uthe, “Amathuba ethu okunqoba i-AFCON angu-100%. Siyiqembu elizimisele ngokusebenza ngokuzikhandla liphinde lenze noma yini ukuze linqobe, futhi uma sigxila kulokho, futhi sikholwa ukuthi singanqoba, akukho okungasivimba.”